Jooji Duubista! - Fahamka si aad ugu soo gudbiso mawduucyada Khachaturyan Nataliya, Istaraatiijiyada Mawduucyada Mabda'a ah
Bing, Yahoo, Google iyo kuwa kale search engine s neceby content content. Macluumaadka kakooban ama laysku duubay micnaheedu waa maqaalado isku mid ah iyo qoraalo ayaa lagu muujiyay bogag internet oo kala duwan oo ku yaal internetka. Sidaa darteed, matoorada raadinta ma helin fikrad ah boggee internetka soo daabacaya content asalka ah iyo sida laysugu daro bogag ama bogag badan - tappeto elastico. Waxay dhaawici kartaa darajada boggaga internetka ee gaar ahaan gaar ahaan marka dadku bilaabeen boggooda internetka e-commerce iyo isku xirnaanta noocyo kala duwan oo isku mid ah. Waa suurtagal in la isbarbardhigo nuxurka kakooban ee tayada sababta oo ah waxay keeni kartaa dhibaatooyin sida nuqullo badan oo ka mid ah qoraalka ama maqaalka ayaa ku yaal bogag kala duwan.
Khachaturyan Nataliya, Sare Istaraatiijiga Mawduuca, wuxuu sharxayaa in akhristaha, ma jeclaan doontid in aad jeceshahay goobo kala duwan oo isla markale soo celiya. Xitaa makiinadaha searchers ma jecla website-yada iyo blogyada muujinaya waxyaabo kicin ah oo kaliya si loo hagaajiyo safarada. Haddii aad la kulantid arrintan, adigu kali kali maaha sida badan oo webmaskers ah oo ka cabanaya oo ku saabsan hababka maareynta maadooyinka kala duwan ayaa loo soo bandhigay si looga hortago waxyaabaha soo koobaya.
Sababaha ka kooban mawduucyo isku dhafan
Waxaa jira sababo badan oo ah sababta nuqulada loo daabacay loona duubay internetka. Inta badan dadka isticmaala ma nuqulo naftaada, waxayna badanaaba nuqul ka qaadaan robots iyo robots 'robots. Waxay dhacdaa sababtoo ah horumariyayaashu uma maleynayaan inay yihiin isticmaale ahaan ama browser-yada waxayna dareemayaan oo keliya dareeraha ama caarada. Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in nidaamyada xog-ururinta ay awood u leeyihiin dhammaan shabakadaha internetka iyo xogta isku midka ah, waxaa jira website-yo iyo barnaamijyo u oggolaanaya qodobo isku mid ah in la daabaco dhowr jeer internetka.
1. Aqoonsiga Kulanka
Haddii aad rabto inaad la socoto booqdayaasha oo aad ku kaydiso macluumaadka ku saabsan boggaaga, waa inaad siisaa dadka martida ah "fadhiyada". Kulanku waa la hayaa marka qofku ku xiro boggaaga ama bogga internetka iyada oo loo marayo aqoonsiga casharka. Waxaad isticmaali kartaa cookies si ay suurtogal u noqoto, waxaana macnaheedu noqonayaa in dhammaan xiriirada gudaha ay helaan aqoonsiga casharka ee ku lifaaqan URL.
2. Cinwaanka URL ee loo isticmaalo kala soocidda iyo raadinta
Sababta kale ee muhiimka ah ee nuqul ama koobiyado la koobi karo waa isticmaalka URL-yada kale duwan ee aan bedeli karin bogga gaarka ah. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa https://www.abc.com/keyword-x/and https://www.abc.com/keyword-x/?source=rss isla mar ahaantaana aysan ahayn URL-yo isku mid ah iyo mashiinnada raadinta ayaa u kala qaybin doona si kala duwan. Qodob kasta oo lagu daro URLka ma beddeli karo qaybaha muhiimka ah ee ka kooban
3. Isku duubis iyo taxadar kooban
Mararka qaar bogagga sadexaad ee shabakadaha nuqul ka samee nuxurkaaga, adiga oo aan kuu sheegin wax kasta. Had iyo jeer mar walba ha siiyaan deymahaaga asalka ah, makiinadaha raadiyeyaashu ma fahmaan sida loola tacaalo dhibaatooyinkaas. Boggaaga caanka ah ee aad caan u tahay waa, wargeysyada iyo spamerada badani waxay xadayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
4. Su'aalaha kala-guurka
In Wordpress iyo nidaamyada kale ee maareynta maareynta, waxaa jira fursado lagu faaqidayo faallooyinka. Waxay keenaysaa in qoraallada lagu duubo internetka
Xalka mawduucyada ku-meel-gaadhka ah
Haddii aad go'aansatay URL-yadu waa URL-yada URL-yada ah ee aad ka kooban tahay, waa inaad bilowdaa habka canonicalization sida ugu dhakhsaha badan. Waxaa loola jeedaa inaad u ogolaato farsamoylayaasha raadinta inay ka ogaadaan qaababka qadiimiga ah ee bogaggaaga internetka oo u ogoloow sida ugu dhaqsaha badan. Xaaladaha qaar, waxaad ka hortagi kartaa nidaamka oo dhan inay abuuraan URL-yada khaldan ee ku jira mawduucaaga, laakiin marmarka qaarkood waxa ay si toos ah dib ugu noqotaa. Haddii aad nuqul ka sameysey mid ka mid ah qof, waxaa muhiim ah in la dammaanad qaado ilaha si ay makiinadaha raadinta u helaan fikrad ah halka ay ka kooban tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso nuqul ka mid ah dadka kale oo u qor qoraaladaada si joogto ah. Waxay kaa caawin doontaa inaad hesho darajo miiran oo wanaagsan.